Abenzi bebrashi Setha abahlinzeki nefektri - China Abenzi bebrashi Setha Abenzi
Isitolo esidayisa yonke impahla 12PCS Rose Gold NK3 Makeup Brushes Set Face Makeup Eyeshadow Eyeliner Lip Brush Set Ithuluzi Nge Metal Box
Ukubuka konke Imininingwane Yesibhulashi: Izinto Zokwenza Ifayibha Yendawo Yomsuka: Zhejiang China Model Number: BRS012NK USE: Face Used With: Lip Liner, CONCEALER, Shaving Brush, BLUSHER, FOUNDATION, Eye Shadow Items Per Set: 12PCS / Set Handle Material: Eco- Ukudweba Okunobungani Izinkuni Okunye kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende Isitayela: I-Angular Blush ...
Amasethi we-2020 MURAN New Deisgn Hot Selling Brush Sets, ama-PC ayi-13 ama-PCs Brushes Blusher Face Powder Izinwele Zebhulashi Elithambile Amathuluzi Wobuhle Yenza i-Brush Kit
Njengoba iklanyelwe ukusetshenziswa ekhaya & professional! Isethi yebhulashi iza ngezindlela nobukhulu obuhlukile ukumboza udinga ukwenza izimonyo ezindaweni ezahlukahlukene zobuso futhi ilingana nakho konke ukwakheka kobuso. Amabhulashi wamehlo enziwe ngezinto zokwenziwa ze-premium zokwenziwa ngesibambo sokhuni ahlinzeka ukuthinta nemizwa emangalisayo. Le sethi yamabhulashi wamehlo ilungele uketshezi, izimpushana, noma okhilimu ukukhiqiza isicelo esihle sokwenza ubuso nobuso. Ukumboza wonke usayizi nokuma kwamabhulashi ukudala izinhlobo ezahlukahlukene ...
I-Muran wholesale 10pcs ikhwalithi ephezulu evunguza isibambo se-unicorn uchungechunge lwebrashi setha i-Spiral Unicorn Makeup Brush Set
Ukuqoqwa Kobungcweti Amabhulashi ezimonyo aphelele ekusebenziseni imikhiqizo yezimonyo ketshezi, impuphu noma ukhilimu, okwenza ubukeke umangalisa ngawo wonke umzuzu ngaphandle kwemfucuza nemikhiqizo yokuchitha ibhulashi. Ama-bristles aminyene enokwethenjelwa futhi ahlala njalo ama-Super dense kanye ne-premium asezingeni elithambile, elifanele futhi avikela isikhumba sakho. Futhi, ibhulashi linikeza isiphetho esingenaphutha futhi esingenamthungo njalo, siletha ukusebenza okuhlala isikhathi eside. Izinto zokuqinisekisa izinwele ze-Ultra ezithambile, eziminyene futhi ezibushelelezi zokwenziwa: 100% -ingenalo unya. ...
I-12Pcs ephathekayo yokuhamba isibambo sokhuni i-Rose Pink Blush Powder Yenza Amabhulashi Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set
Igama lomkhiqizo 12Pcs Portable Travel Wooden handle Rose Pink Blush Powder Make Up Brushes Eyeshadow Brushes Professional Makeup Brush Set Material Synthetic hair + Wooden handle + aluminium ferrule Into no.: isikhwama se-pu, bese ama-200sets ekhoneni Isikhathi sesampuli se-5-7days, isidingo esenziwe ngokwezifiso Isikhathi sokukhiqiza se-15-20days Kuya ngobuningi bakho, ngaphansi kwama-2000sets adinga i-15-20days, Ngaphezu kwama-2000sets ...
I-2020 yekhwalithi ephezulu ye-14pcs yezinkuni Ibhulashi lezimonyo i-Makeup Brushes Makeup Brush Setha i-Private Label makeup brush set
●I-14-PIECE BRUSH IQOQO: Vala zonke izidingo zakho zazo zonke izimonyo zakho. Usebenzisa ibhulashi lokuxubana le-BS-MALL, ibhulashi leshiya, amabhulashi we-eyeshadow njalonjalo kungakunika imiphumela efana nokwakheka okusetshenziswe ngumculi wezimonyo oqeqeshiwe!
● FIT BONKE UBUSO: Amabhulashi okwenziwa kweso avela ezinhlobonhlobo zobukhulu nosayizi yingakho efanelekile ukugcotshwa nokugqanyiswa kobuso bobuso.
● Ama-bristles we-Vegan & Cruelty-Free: Ama-bristles enziwe kahle ngenayiloni eqinile yokwenziwa nge-fiber-soft and silky, eqinisekisa ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Yonke imabhulashi yokwenza izimonyo ilungile futhi iminyene, ilungele ngisho isikhumba esibucayi kakhulu. Ngamandla amakhulu okubamba we-powder, amabhulashi azoba umsizi omuhle wokwenza ukubukeka okungenaphutha.
Amathuluzi Wobuhle Isitolo esidayisa yonke impahla 7 PCS Quicksand Brush Sets With Diamond Sequin Make-up Brush Set
[I-SOFT DENSE BRISTLES]: amabhulashi we-makeup enziwe ngemicu yokwenziwa esezingeni eliphakeme, ikunikeza ukuthamba okuthambile nokunethezeka kokuthinta, akukho ukulimala kwesikhumba, okulungele ngisho nesikhumba esibucayi kakhulu futhi okuhle kunoma yiluphi uhlobo lwesicelo samanzi noma ukhilimu.
[AKUKHO UKUSHADA]: Kwenziwe nge-high-end performance alloy, Izinto zepulasitiki nokwenziwa okuminyene, akukho ukuchitheka okucasulayo ebusweni bakho ngesikhathi senqubo yokwenza isicelo.
[AMABHRASHI AMAHHALA OKUVUSELEKA]: Ngalezi zinto ezisebenza njenge-Foundation Powder Concealers Eye Shadows Makeup Brush Sets, zisebenza kalula futhi zixube i-powder, i-highlighter, i-concealer, isithunzi, i-liner, nokuningi. Okuhloselwe ukuqalisa izimonyo nabathanda.
I-Rose golden Glitter Handle 10pcs crystal diamond foundation brush ibekwe ngamabhulashi wesikhwama se-PU
Isethi yebhulashi iza ngezindlela nobukhulu obuhlukile ukumboza udinga ukwenza izimonyo ezindaweni ezahlukahlukene zobuso futhi ilingana nakho konke ukwakheka kobuso.
Amabhulashi wamehlo enziwe ngezinto zokwenziwa ze-premium zokwenziwa ngesibambo sokhuni ahlinzeka ukuthinta nemizwa emangalisayo.
Le sethi yamabhulashi wamehlo ilungele uketshezi, izimpushana, noma okhilimu ukukhiqiza isicelo esihle sokwenza ubuso nobuso.
Ukumboza wonke usayizi nokuma kwamabhulashi ukudala ubuso bezimonyo ezahlukahlukene, isethi yebhulashi eyingqayizivele ingahlangabezana nazo zonke izidingo zakho, ikhombise ubuhle bakho bemvelo futhi ishiye ukwakheka okungenasici.
Izibambo zamabhulashi ezimonyo zenziwe nge-alloy ephezulu nezinto zokhuni. Kulula ukuyibamba futhi ihlale isikhathi eside usebenzisa.
Amabhulashi ekhishi lebrashi yokwakheka enziwe kahle ngocingo oluqinile lokwenziwa - inayiloni elithambile nelisilika. Abukho isihluku futhi bunobuhlobo besikhumba.Incazelo Yomkhiqizo